विप्लवको बन्द : सहरमा बम आतंक, ठाउँ ठाउँमा आगजनी, कहाँ के भयो? – Korea Pati
विप्लवको बन्द : सहरमा बम आतंक, ठाउँ ठाउँमा आगजनी, कहाँ के भयो?
March 14, 2019 LeaveaComment on विप्लवको बन्द : सहरमा बम आतंक, ठाउँ ठाउँमा आगजनी, कहाँ के भयो?
काठमाडौँ : नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको बन्दको असर देशभर देखिएको छ । कडा सुरक्षा गरिएको संघीय राजधानी काठमाडौँमा बन्दको आंशिक प्रभाव परे पनि देशका अधिकांश भागमा बन्दले यातायात र बजार ठप्प भएका छन् ।
सरकारले आफ्ना गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै विप्लवका कार्यकर्ताले बुधबार रातिदेखि नै राजधानीसहित देशका विभिन्न सहरमा बम आतंक सुरु गरेका थिए ।
बन्दअघि बुधबार राति काठमाडौँ र देशका विभिन्न स्थानमा राँके जुलुस पनि निकालिएको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रतिक्रिया जनाउँदै महासचिव विप्लवले केपी–बादल कम्पनीलाई उचित जवाफ दिन आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।
कहाँ के भयो ?
विप्लवका कार्यकर्ताले बन्दका क्रममा बिहीबार बिहानै देशका विभिन्न स्थानमा सवारी साधन जलाएका छन् । देशका विभिन्न सडक र सहरमा बम राखिँदा सर्वसाधरण त्रसित भएका छन् ।
ठाउँ ठाउँमा बम राखिएपछि नेपाल प्रहरीको बम डिस्पोजल टोलीको पनि व्यस्तता बढेको छ ।
नवलपरासीमा ट्रक जलाइयो
विप्लवका कार्यकर्ताले पूर्वपश्चिम राजमार्गस्थित पश्चिम नवलपरासीको बासाबसहीमा गएराति दुई ट्रकमा आगजनी गरेका छन् । ८/१० जनाको समूहमा आएका अज्ञात व्यक्तिले आगजनी गरेका हुन् ।
काठमाडौँबाट धनगढीका लागी बासाबसही नजिक रहेको स्टिल कम्पनीमा रड लिन आएका ट्रक खाली रहेको प्रहरीले जनाएको छ । आगलगीबाट ट्रकका टायर पछाडीको भागमा क्षति पुगेको छ । बन्दको पूर्वसन्ध्यामा गरेको आगजनी विप्लव समूहले गरेको आशंका प्रहरीको छ ।
राजमार्गमा नक्कली बम
पूर्वी नवलपरासीको राजमार्गमा पर्ने जयश्री पुलमा त्रसित बनाउन राखिएको शंकास्पद वस्तु सुरक्षाकर्मीले हटाएका छन् । शंकास्पद वस्तु राखेपछि सवारीसाधनलाई वैकल्पिक बाटोबाट आवत जावतको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
बोराभित्र राखिएको उक्त वस्तुमा खाली टिन र व्याट्री रहेको सुरक्षा निकायले जनाएको छ । अरुणखोला बाट आएको नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बाल्टीमा जुटको बोराले बेरेर माटो र तार राखेर बनाएको शंकास्पद बस्तु विहान ८ बजे हटाएको हो ।
बिहीबार राति १२ बजेदेखि अस्तव्यस्त राजमार्गमा सवारी साधन दुईतर्फी सुचारु भएका छन्। विप्लव समूहको बन्को प्रभाव पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा पनि परेको छ ।
मकवानपुरमा पनि जलाइयो
थाहा नगरपालिका–४ नयागाउँमा ट्रकमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ । काठमाडौंबाट हेटौंडातर्फ आइरहेको ना ५ ख ७४११ नम्बर ट्रकमा गएराति करिब एक बजेको समयमा अज्ञात समुहले आगजनी गरेको मकवानपुर प्रहरी प्रमुख एसपी मुकेश सिंहले बताए ।
पालुङ र दामनको जंगलबीच नयाँ गाउँमा ट्रकलाई रोकी घरेलु हतियार देखाएर ४–५ जनाको समूहले पेट्रोल खन्याएर अगजनी गरेको चालकलाई उदृत गर्दै मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
ट्रकमा चालक, सहचालकसहित तीन जना सवार थिए । अगजनीबाट ट्रकको टेलरमा क्षति भएको छ एसपी सिंहले जानकारी दिए । ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपाल बन्द सफल पार्ने नाममा त्रास सिर्जना गराउन आगजनी गरेको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ’, उनले भने, ‘जिल्लाको अन्य स्थानहरुमा भने दैनिकी सामान्य रहेको छ ।’
कैलालीमा बिहेको गाडी जलाइयो
नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीको बन्दको सुदूरपश्चिममा आंशिक प्रभाव परेको छ । सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी बजारमा मोटरसाईकल, ईरिक्सा र चार पांग्रे सवारी साधन चलिरहेका छन् भने अधिकांस बजार बन्द रहेको छ ।
बुधबार बेलुकी भजनीबाट आईरहेको विवाहको गाडीमा मसुरिया र राजीपुरकोबीच जंगलमा आगो लगाई दिएको छ । म १ ख ४४१ नम्बरको विवाहको गाडिमा आगो लगाईएको हो ।
आज बिहान पहाडि जिल्लाबाट धनगढीतिर आइरहेका सार्वजनिक सवारी साधन रोकिरहेका विप्लव समूहका तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उता प्रदेश ५ को राजधानी सहर बुटवलको व्यस्त कालिका चोकमै शंकास्पद बस्तु भेटिएको छ । कालिका चोकस्थिग सडकको डिभाइडरमाथि प्लास्टिकले बेरेर राखेको अवस्थामा बम जस्तै शंकास्पद बस्तु भेटिएपछि सेनाको बम डिस्पोजल टोलीलाई बोलाइएको छ ।
बुटवलमाा भेटिएको बम जस्तो बस्तु । तस्बिर : विकास पराजुलीको फेसबुकबाट
प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि बम भेटिएको छ । खतरा लेखेर कागज र प्लास्टिकले बेरेको अवस्थामा उक्त बम भेटिएको हो । बम भेटिएपछि त्यहाँ सुरक्षाकर्मीलाई बोलाइएको छ।
गोरखा बजारमा बम
गोरखा बजार क्षेत्रको भिआईपी टोल र १२ किलो भन्ने स्थानमा मा शक्तिशाली प्रेरकुकर बम फेला परेको छ । फेला परेको बम नेपाली सेनाको टोलीले निष्कृय पारेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी उपरीक्षक भोलाबहादुर रावलले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबार बिहान १२ किलोमा फेला परेको बम सामान्य भएको भन्दै प्रहरीले जंगलमा फालिदिएको छ ।
तर गोरखा बजार क्षेत्रमा फेला परेको बम मानव बस्तीमा भएको हुनाले नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली घटना स्थलमा पुगेर निष्कृय पारेको हो । मुख्य सडकसँगै राखिएको उक्त बमका कारण वरपर रहेका वस्तीका सर्वसाधारण त्रसित भएका छन् ।
हेटौँडामा शंकास्पद बस्तु
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ एचआईडीमा बम जस्तो शंकास्पद बस्तु भेटिएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन् । एफएम चोकमा टिफन बक्समा बम र खतरा लेखेर राखिएपछि स्थानीय त्रसित बनेका हुन् । अहिले त्यहा नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली त्यहाँ पुगिसकेको छ ।
बाजुराका दुई ठाउँमा श‌ंकास्पद बस्तु
उता बाजुराका दुई स्थानमा श‌ंकास्पद बस्तु फेला परेका छन् । बम जस्ता शंकास्पद बस्तुका कारण सवारी साधन पनि अवरुद्ध भएका छन् । शंकास्पद बस्तु भेटिएपछि सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरिएको छ।
सुरक्षा परिषदमा भारतलाई धक्का : चीनले जैस–ए–मोहम्मदलाई आतंकवादी घोषणा गर्न मानेन
यात्रुलाई ओरालेर बसमा आगजनी
प्रहरीको उच्च निगरानीमा ‘विप्लव’ समूह, सशस्त्र प्रहरीसमेत हाइ अलर्टमा
काठमाडौं बम विष्फोटमा संलग्न आराेपित चार जना पक्राउ